[Spaoro ] 19 Mey, 2008 12:29
Iza no ho tompon-daka ny Erôpa?
Ajanoko kely indray aloa ny fanomezana vaovao avy aty dago androany fa hitodika kely @ ity lalao famaranana ny ho tompon-daka ny Erôpa ity aho, tsoriko mantsy fa tena lina tanteraka @ izy ity ny malagasy isan-taona. Tsy mahagaga izany satria dia ahitana ireo mpilalao malaza eran-tany milalao moa ity Champion's League ity! ary ity no fifaninana tsy mba ahitana firy klioba anjakan'ny frantsay ka mahafinaritra ny mijery azy.
Raha mbola somebiseby @ fanarenana ny lapan'ny tanàna ny olona dia ny ady baolina kitra goavana hikatrohan'ny Chelsea sy Manchester United no malaza ankehitriny, ary tena hita fa mifadanja tokoa ny herin'ny roa tonta ankehitriny raha ny fitiavan'ny malagasy azy no ambara. Ao ireo tia an'i Ronaldo Christiano tsy vitsy koa anefa no mirevy an'i Didier Drogba!!! ka ho hita eo indray izay hahavoa @ ity indray maka ity.
Ny ahy manokana izao dia mitongilana kely any @ chelsea ny fitiavako ny antony dia tsotra fotsiny tsy mbola nahazo mihitsy izy kanefa dia efa sokajina ho klioba matanjaka any Eropa, sady voan'i manu t@ kely foana izy t@ "premier league"!
Ny fanirina moa dia ny mba hahita ny lalao mivantana h@ farany fa indraindray mantsy manondrana ny Tvm rehefa misy vaovao momba ny hetsika ataon'ny mpitondra izay dia any @15mn any aorina ny fanombohon'ny fotoana vao alefany ny lalao toy ny niseho t@ CAN farany teo.
Ho santatry ny lalao olimpika sy ny euro2008 moa izy ity, ny nofinofy dia ny mba oe rahovina ihany ilay gasy kely vao mba hojerena mivantana @ fahitalavitra ary?